2021 ခုနှစ်တွင်သင်၏မိုဘိုင်းအသစ်ကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ရန်အတွက်ဤလမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာပါ Gadget သတင်း
Jose Rubio | | မိုဘိုင်း, တယ်လီဖုန်း
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကမိုဘိုင်းဖုန်းများဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ ကြိုတင်ကြိုကြားကြိုကြား SMS ပေးပို့ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ် (သို့) အလုပ်အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိရန်ခဲယဉ်းသည့်အခါ၊ စျေးကွက်တွင်မော်ဒယ်လ်အနည်းငယ်သာ ရှိ၍ ၎င်းတို့အနက်မှအများစုသည်အချို့သောဆိပ်ကမ်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမပြုလုပ်ဘဲအတူတူပင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့သူတို့ရွေးချယ်မှုသည်ရရှိနိုင်မှုနှင့်အိတ်ဆောင်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ပေးဆပ်လိုသောစျေးနှုန်းပေါ်မူတည်သည်။
ယနေ့, ထုတ်လုပ်သူများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်နှင့်၎င်းတို့၏ထက်ပိုသောကြောင့် ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား, စျေးနှုန်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ၏ကျယ်ပြန့်မော်ဒယ်များမိုဘိုင်းလ်ဆိပ်ကမ်းအများအပြားအကြားဆုံးဖြတ်ရန်မှာအငြင်းပွားစရာများစွာဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ သူ့ရဲ့ကင်မရာ၊ ပရိုဆက်ဆာ၊ မျက်နှာပြင်ရဲ့အရွယ်အစား၊ အရည်အသွေးတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ် နှင့်၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်၏ပင်, ငါတို့လိုချင်သောအခါတိုင်းအရူးသွားပါ ဖုန်းကိုအသစ်လုပ်ပါ။ ပိုပိုမကြာခဏလုပ်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကိုချန်ထားခဲ့သည် သင်၏ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များဖြင့်လမ်းညွှန်ပါ ယခုအချိန်တွင်လာသောအခါ။ ငါတို့နှင့်အတူလိုက်နိုင်မလား?
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းသို့ပြန်သွားပါကသာမန်နိုင်ငံသားများတတ်နိုင်သောပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းများမှာလမ်းများပေါ်တွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးဖြစ်သည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းများအသုံးပြုမှုပျံ့နှံ့လာသောအခါအချက်များ။ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းမရှိသူသည်အိမ်၌သော်လည်းကောင်း၊ ရုံး၌သော်လည်းကောင်းဖုန်းမ ၀ င်ဘဲဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကကတ်တလောက်ဟာအလွန်သေးငယ်ပြီးလက်ကိုင်ဖုန်းကိုသုံးတဲ့နည်းလိုပဲ။ ဒါပေမယ့်နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာဒီ variable နှစ်ခုလုံးကိုတိုးချဲ့ခဲ့တယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနီးပါးမှာမျက်နှာပြင်တစ်ခုတပ်ထားတယ်၊ လက်တွေ့မှာငါတို့လက်တွေထဲမှာသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်တာနက်ကိုအမြဲတမ်းအင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေရှိတယ်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ခန့်ကမမြင်နိုင်သည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဒီနေ့သူတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အလုပ်များများပြားလာခြင်းနှင့်စျေးကွက်တွင်များစွာကွဲပြားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းကိုပေးချင်တာကိုအာရုံစိုက်ကြပါစို့။ အသက် ၂၀ အရွယ်လူငယ်တစ် ဦး အတွက်မိုဘိုင်းကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်မတူညီပါ။ အဓိကအသုံးပြုမှုမှာအပန်းဖြေခြင်း၊ တိုးချဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြိုကြားကြိုကြားဓာတ်ပုံများနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုကိုရှာဖွေပါ။
6 အဆုံးမဲ့စစ်တိုက်: operating system ကို။
လက်ကိုင်ဖုန်း ၀ ယ်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကျနော်တို့ရှိသည်ဘတ်ဂျက်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကန့်သတ်ချက်သည်ယူရို ၂၀၀ ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်အကွာအဝေးကိုရှာဖွေခြင်းသည်မိုက်မဲလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့လက်လှမ်းမမီနိုင်သောစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်ရွေးချယ်မှုများကိုစတင်ရှာဖွေလိမ့်မည်။ ဤသည်သည်ငါတို့ရှာသည်မပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သောတစ်ခုတည်းသော variable ဖြစ်သည် ဒုတိယလက် terminal သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကိုနှစ်နှစ်စုံအဆင့်မြင့်တဲ့စမတ်ဖုန်းကိုအလယ်အလတ်တန်းစားဒါမှမဟုတ်အခြေခံအကွာအဝေးမှာတောင်တွေ့နိုင်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှကုန်ကျမည်၊ မည်မျှသုံးစွဲလိုသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သွားသည် လာမည့်ခြေလှမ်း: မျက်နှာပြင်။ ယနေ့မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည် မိုဘိုင်းအရွယ်အစားနှင့်တိုက်ရိုက်အချိုးကျသူတို့စက်ကိရိယာ၏ရှေ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုသိမ်းယူထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်၊ မျက်နှာပြင်ကြီးကျနော်တို့နှင့်အတူ terminal ကိုရှိသည်ဖို့ရှေ့နေများဖြစ်လိမ့်မည် မျက်နှာပြင်ပိုမိုပိုပြီး ကိုင်တွယ်ရန်မသက်မသာ ဒါကြောင့်ငါတို့အိတ်ကပ်ထဲမှာရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ လာသောအခါကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးနှောင့်အယှက်ပါလိမ့်မယ်အရာတစျခုနှငျ့အတူ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် terminal ကိုပေးလိမ့်မည်ဟုအသုံးပြုမှုကိုစတင်စတင်သတ်မှတ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သောစမတ်ဖုန်းကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာဖွင့်ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်များကဲ့သို့က ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်ငါတို့အဘို့ကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည် ကက။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ငါတို့ပြီးသားအဲဒါကိုအတွက်တက်ဘလက်ရှိပါကဒါကဒါကအလယ်အလတ်တစ်ခုခုပဲ သေးငယ်။ ပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိသော terminal သည်လုံလောက်လိမ့်မည်အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုစွန့်လွှတ်သည်။ အရွယ်အစားအပြင်ကျနော်တို့က၎င်း၏မှအထူးအာရုံစိုက်ရပေမည် resolution ကို နှင့်၎င်း၏နည်းပညာ။ စံပြလား အနည်းဆုံး Full HD resolution နှင့် LED နည်းပညာတို့ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဖဝါးတွင်အကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်အရည်အသွေးရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသစ်တဖန် ပြန်လည်၍ စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး ၀ ယ်လိုပါကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းမှရရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ဒါကနှေးကွေးနေဖြစ်ပါသည်, သူကနှေးကွေးအလုပ်လုပ်, ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ကပိုအလားအလာရှိသည်ဖို့ကမွမ်းမံချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်မှာတာဝန်ရှိသူများဖြစ်သည် ပရိုဆက်ဆာနဲ့ RAM။ ဒါကြောင့်မို့အရင်မျိုးဆက်ပရိုဆက်ဆာကိုတပ်ဆင်ရန်လအနည်းငယ်အတွင်း၌ခေတ်မမီတော့သောကိရိယာနှင့်ကျန်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
အမြဲတမ်းလယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ ကျွန်တော်တို့က cores အရေအတွက်နဲ့ clock speed ကိုလမ်းညွှန်နိုင်ပါတယ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော devices များအကြားနှိုင်းယှဉ်။ ယနေ့ခေတ်တွင်မရှိသောမိုဘိုင်းသည်ရှားပါးသည် quad core ပရိုဆက်ဆာ။ ဟုတ်ကဲ့၊ များစွာသောကွန်ပျူတာများထက် ဒါကိုမမေ့ကြစို့နဲ့ RAM ကိုနောက်ကွယ်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်တာ ၀ န်ရှိသဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းမှာမရှိခြင်း အများအပြားပျက်ကျခြင်းနှင့်ဆွဲတင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည် applications များ switching သောအခါ, ဥပမာ။ ဒီနေ့ ၂၀၁၉ အလယ်ပိုင်းမှာ၊ 2Gb လောက်ပဲကျန်တော့မယ် နှစ်အနည်းငယ်အတွက်အနည်းဆုံးကိန်းဂဏန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ထက်ပိုသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းများ၏အချက်အလက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်တစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး ၏မျက်နှာသာအတွက်စီရင်ချက်ရရှိရန်တွန့်ဆုတ်သောသူတို့အထဲ၌ရှိကြ၏။
စွမ်းဆောင်ရည်အတွင်းမှာငါတို့လည်းပါဝင်နိုင်သည် သိုလှောင်မှု။ သငျသညျများသောအားဖြင့်တစ် ဦး ရှိပါက ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုအမြောက်အများအက်ပလီကေးရှင်းအတော်များများနှင့် Cloud ပေါ် မူတည်၍ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်မှာသေချာသည် သငျသညျပိုပြီးသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းပေါ်မှာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုမိုးတိမ်တွင်စုစည်းထားခြင်း (သို့) ၎င်းတို့ကိုအမြဲတမ်းမလိုအပ်သောအရာများရှိလျှင်၊ များသောအားဖြင့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုများများသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိလျှင်၊ မှတ်ဥာဏ်ပမာဏနည်းသောမော်ဒယ်လ်သည်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များ။
လက်ရှိလက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့လွဲချော်နေသောအရာတစ်ခုခုရှိပါက၎င်းသည်ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ Nokia ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာအားသွင်းပေးခဲ့လဲ၊ အနီးအနားမှာ plug တစ်ခုသတိထားမိစရာမလိုဘဲတစ်ပတ်ကျော်ကြာအသုံးပြုနိုင်တယ်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်စွမ်းအားတိုးခြင်းနှင့်ဖန်သားပြင်အရွယ်အစားနှင့်သူတို့လိုအပ်သောသုံးစွဲမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်မှန်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသောနာရီအရေအတွက်ပိုများသည်သူတို့၏ကြာချိန်ကိုများစွာလျော့ကျစေသည်။ ဘက်ထရီစွမ်းရည် ၎င်းကို amp-နာရီများတွင်တိုင်းတာသည်။ သို့သော်ဘက်ထရီများတွင်စမတ်ဖုန်း၏သေးငယ်သော၊ နာရီမီလီဂရမ် (mAh). ပို mAh, သူကသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်ကုန်တင်များနှင့် ကျနော်တို့ရရှိနိုင်သည်ကိုပိုမိုသီအိုရီကြာချိန်.
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ဟာသီအိုရီကြာတဲ့အကြောင်းပြောနေတာပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တူညီတဲ့ဘက်ထရီစွမ်းရည်နဲ့အတူအားပြည့်တဲ့သူတွေထက်အခြားသူတွေထက်ပိုကြာတဲ့မော်ဒယ်တွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည် သင့်ရဲ့ Processor ကို၏ထိရောက်မှုနှင့်နည်းပညာနှင့် သင့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား။ အနိမ့်ဆုံးလေကြီးလေလေအလင်းပြန်ရလေလေ pixel များများပြလေလေလိုအပ်လေလေဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုစွမ်းရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တူရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်နည်းသောပရိုဆက်ဆာသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းနှင့် တွဲဖက်၍ ကောင်းသောဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုကင်မရာမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုထင်ရသည်။ နှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုပင်ကင်မရာများမပါဘဲ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဖတ်နေစဉ်ဘက်ပေါင်းစုံကင်မရာသုံးခုဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများရှိပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းအသစ်အားသင်ပေးမည့်အသုံးပြုမှုသည်အပန်းဖြေမှုသို့မဟုတ်fကိုပင်အာရုံစိုက်မည်ဆိုလျှင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် otographyသေချာပေါက်ရေတွက်ပါ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကနေထွက်လာတဲ့ကင်မရာကောင်းတစ်ခုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ အနိမ့်ဆုံးစမတ်ဖုန်းတွေမှာတောင်မှကောင်းမွန်တဲ့ကင်မရာထက်ပိုပါတယ် အနည်းဆုံး 8 megapixels သုံးစွဲသူအများစု၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီသောအရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
သတိထားရသော်လည်း megapixels နှင့်တွဲဖက်သောပုံကိုသာမကြည့်ပါနှင့်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ resolution ကိုသာဖော်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပုံရိပ်၏အရွယ်အစားသည်အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးမီသို့မဟုတ် pixelated မဖြစ်မှီကဖြစ်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာ သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားကိုသိဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအလင်းကမြင့်လေလေအလင်းနည်းလေလေအလင်းနည်းလေလေဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့်ကင်မရာနှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုသောအရာများတွင်အထူးသဖြင့်ကင်မရာအမျိုးအစားသည်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည် သာမန်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက်အာရုံခံကိရိယာသည်တာ ၀ န်ရှိသည်ခဏတာ အခြားတစ် ဦး ပိုကြီးတဲ့ချဲ့ရှိပါတယ် ၎င်းသည် telephoto မှန်ဘီလူးအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအကွာအဝေးရှည်သောအရာဝတ္ထုများ၏ပုံရိပ်များကိုပိုမိုဖမ်းယူနိုင်သည်။
အဆုံးမဲ့စစ်တိုက်: operating system ကို။
ဒါပေမယ့်အားလုံးအထက်, တစ် variable ကို ၎င်းသည်သင့်အားစမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးသို့မဟုတ်အခြားအမျိုးအစားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည် ၎င်းသည်သင်၏လည်ပတ်ရေးစနစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Android မှာအများကြီးအများကြီးရှိပါတယ် ကျယ်ပြန့်သောအမှတ်တံဆိပ်များ၏ဆိပ်ကမ်းများတွင်စံအဖြစ်တပ်ဆင်ထားသည်အတိုင်း devices များ၏။ အချိန်အတောအတွင်း, iOS ကိုရှာမယ်ဆိုရင် Apple နဲ့ iPhone ကိုရွေးစရာမရှိတော့ဘူး။ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုကခွင့်ပြုသည့်ရွေးချယ်မှုများ၊ ၄ င်းတို့၏ interface အဆင့်ရှိကွဲပြားခြားနားမှုများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုနှင့်သာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ များသောအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်တွင်ဆက်ဖြစ်နေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ဆုံးသောကိန်းရှင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းကိုနောက်ဆုံးမှနောက်ဆုံးထားရှိသည် ရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးသာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးသော operating system ကိုရွေးချယ်ပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း မိုဘိုင်းကိုပြောင်းလဲပြီးမှန်ကန်စွာပြုလုပ်ရန်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒါဟာအကြောင်းပါ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဂရုတစိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ရွေးပါ တစ်ခုချင်းစီကို variable ကိုအားပေးပြီးမှအရေးပါမှု အလို့ငှာဤနည်းဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောကိရိယာသို့ရောက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီလမ်းညွှန်နှင့်အတူ မိုဘိုင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်သည်သင့်အတွက်များစွာလွယ်ကူသည်သေချာသည် ဒါကြောင့်ခင်ဗျားစက်အသစ်ကိုအသစ်ထပ်လုပ်တော့မလား၊ ဒါမှမဟုတ်နောက်မှထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်တွေကိုမမေ့ပါနဲ့၊ သူတို့ကအသုံးဝင်လိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းအသစ်ကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ရန်အတွက်ဤလမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာပါ
AOC သည် AGON ၏တတိယမျိုးဆက်ကွေးကောက်ဂိမ်းစက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Samsung Galaxy S10 ၏ Unpacked ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင်တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်